ရန်ကုန် မှာ ကိုဗစ်ထက် ပိုဆိုး လာနိုင်တဲ့ တိတ်တဆိတ် ဇီဝိန်ခြွေ သမား (ကျန်းမာရေး အတွက် အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်) – Shwe Sar
ရန်ကုန် မှာ ကိုဗစ်ထက် ပိုဆိုး လာနိုင်တဲ့ တိတ်တဆိတ် ဇီဝိန်ခြွေ သမား (ကျန်းမာရေး အတွက် အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်)
တစ်ပြည်လုံး တစ်ကမ္ဘာလုံး စိုးရိမ်တကြီး အာရုံစူးစိုက်နေတဲ့ကိုဗစ်သည် ကာကွယ်ဆေး တွေ့လို့ WHO ခန့်မှန်းချက်အရဆိုလျှင် ၂နှစ်အတွင်း ကပ်ရောဂါပြီးသွားမယ်လို့ ပြောကြပါတယ်… ဒါေ ပမ ယ့်ရ န်ကုန်မြို့တွင် ဆောင်းရာသီနှင့် နွေဦးကာ လတိုင်း ဖြစ်ပေါ် တက်သော အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်အဆင့်ရောက်တက်သည့် လေထုညစ်ညမ်းမှုကြီးကိုရော ဘယ်တော့မှ ပြီးဆုံးမလဲ? လွ န် ခဲ့ေ သာ၂ရက်က ကျွန်မအင်းယာကန်နားမှာ ခါတိုင်းလို ပြေးပါတယ်… ကျွန်မသည် တစ်ပတ်မှာ ၂-၄ရက် ကို တစ်ခါပြေးရင် ၅-၁၀ ကီလိုမီတာ အမြဲတိုင်းပြေးဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် နို ဝင်ဘာ ၁၈ ရက် နံနက် ၇:၃၀ မှာ ပြေးနေရင် ကျွန်မသည် အသက်ရှူရတာ ခါတိုင်းထက်ပိုပြီး ကျပ်လာပါတယ်… နှလုံးခုန်နှုန်းကလည်း ပျမ်းမျှအားထက် ပိုမြင့်တက်သွားပါတယ်။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ လည်ချောင်းနားလာပြီး glands တွေရောင်လာတဲ့အတွက် သံသယရှိလို့ AirVisual ဆိုတဲ့ app ကို AQI (အလေထုညစ်ညမ်းမှုအဆင့်) ကိုဖွေ့ကြ ည့်လို က်ေ သာအခါ 151 AQI (Unhealthy level)! အဲတော့မှ ကျွန်မသည် ပြေးနေစဉ် အဆိပ်အတောက်များစွာပါဝင်သည့် မီးခိုးများကိုရှူပြီး မိမိ၏အဆုတ်ကို ပြင်းထန်စွာ အလုပ်လုပ်စေလိုက် မိသ ည်ဟု သိလိုက်ရသည်။ ပြီတော့ကျွန်မသည် ဆေးလိပ်မသောက်တဲ့လူပါ သို့သော် ကျွန်မသ ည်ဆေးလိပ် ၃-၅ လိပ်နဲ့ ညီမျှသည့် ပမာဏကို အားကစားလုပ်နေသည့် တစ်နှာရီအတွင်း သ န့် ရှင်းသည်ဟု ထင်သောလေမှ တဆင့်ရှူမီလိုက်ပြီးလား ဆိုပြီး တွေးဖြစ်လိုက်သည်။ အခုရက်ပိုင်း လေထု ညစ်ညမ်းမှု သိသိသာသာ မြင့်တက်လာပါတယ်… နိုဝင်ဘာ၁၈,၁၉,၂၀ သုံး ရက် ရှိပြီး air pollution level က မနက် (၅-၈ နာရီ) တိုင်း 150 AQI နဲ့အထက်ပါ…ထူးဆန်းတာက ကားတွေလမ်းပေါ်မှာ လုံးဝမရှိတဲ့အချိန်မှာ လေထုညစ်ညမ်းမှုက အရမ်ြး မင့်နေတော့ ကျွန်မ အဖြေရှာရခက်တော့သည်။ ဒါနဲ့ပဲ မနက်နိုးလာတိုင်း ပြတင်းပေါက်အပြင်သို့ ကြည့်ဖြစ်သော်အခါတိုင်း ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အချို့နေရာမှာ မီးခိုးတထောင်းထော င်းထွက်နေသ ည် ကိုေ တွ့ရသည်… စက်မှုဇုံလည်းမဟုတ်ပါ…မြို့လယ်ခေါင်က ထွက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရတာပါ။
ကျွန်မ သတိရမိ တာကအရင်နှစ် ကလည်း AirVisual app နဲ့ကြည့်တော့ ဆောင်းရာသီအစပိုင်းကနေ နွေဦးအထိ ဒီလိုပဲ လေထုညစ်ညမ်းမှု မြင့်တက်မှု(130-200 AQI) ရှိခဲ့သည်…မိုးရာသီရောက်တော့ လေထုညစ်ည မ်းမှုပြန်လျှော့ (20-70 AQI) သွားသည်။ နောက်ထပ် သတိရမိတာက ဆောင်းဦးဆိုရင် အမှိုက်မီးရှို့ မီးစာလုံကြတဲ့ ဓလေ့… ကျွန်မ မနေ့ကပဲ စိ တ် ကူးယဉ်ဖြစ်တယ် အမှိုက်မီးရှို့မှုများကို အရေးယူနိုင်သည့် ဥပဒေကို စည်ပင်သာယာကိုအကြံပြုမယ်ပေါ့… သို့သော် အမှိုက်မီးရှို့မှုများကို အရေးယူနိုင်သည့် ဉပဒေရှိပြီးသားဆိုတာကို ဒီနေ့ po st တစ်ခုကနေဖတ် ဖြစ်လို က်သည်… အဲ post ကပြောတာက “အမှိုက်မီးရှို့မှုများကို အရေးယူနိုင်သည့် ဉပဒေရှိသော်လည်း ရပ်ကွက်တိုင်းတွင် လူ သန်းပေါင်းများစွာမှ စွဲစွဲမြဲမြဲ ဆော င်ရွ က်နေသည့် ကိစ္စဖြစ်သည်က တစ်ကြောင်း၊ အမှိုက်မီးရှို့လျှင် လေထုညစ်ညမ်းစေသည်ကို သိရှိနားလည်မှုမရှိကြခြင်း…”။
အကျဉ်းချုပ်ပြောရရင် အမှိုက် မီးရှို့တဲ့ မီးခိုးများကနေ အသက်ရှူလ မ်းကြောင်းဆိုင်ရာ၊ အဆုတ်၊ နာတာရှည်ရောဂါ နှင့် ကင်ဆာ ဖြစ်စေသော်အဆိပ်အတောက် (carcinogen) များစွာပါ ဝင် ပါသည်။ သစ်ရွက်သစ်ခြောက် များဆိုတာ သဘာဝအတိုင်း ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနို င်သည့်အရာ (biodegradable) ဖြစ်ပြီ ဓာတ်မြေသြဇာ နဲ့ မြေဆွေး (soil compost) အနေနြဲ့ ပန်သုံး လို့ရတဲ့ အတွက်မီးရှို့စရာမလိုပါဘူး။ တစ်ခြားအမှိုက်များ အထူးသဖြင့်လပ်စတစ်ဆိုတာက မီးရှို့ရမယ့်အရာမဟုတ်ပါ…စည်ပင်သာယာ နဲ့ recycle companies တွေကနေ တာဝန် ယူပြီ ထိန်းသိမ်းလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ အခုကာလသည် ပိုပြီအရေးကြီးသော ကိုဗစ်ရောဂါကို ကာကွယ်ဖို့ ဦးစားပေးရမယ့် အချိန်ဆိုတာမုန်ပါတယ်…ဒါပေမယ့် ရေရှည်အတွက် ရန်ကုန်သူ ရန် ကုန်သားတွေ ကျန်းမာသော လူနေမှုစနစ်တစ်ခုကို ကိုဗစ်အလွန်မှာ ဆက်လက် နေထိုင်ရန် အလိုရှိသေးတယ်ဆိုရင်တော့ ရန်ကုန်၏ အသက် အန္တရာယ်စိုးရိမ်အ ဆင့်ရော က်သ ည့်လေထု ညစ် ညမ်းမှုအား လျှော့ချရန် အတူတူ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ လေထုညစ်ညမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ တစ်နေ့တာအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကို ကိုဗစ်လိုတော့ မကြေညာပါဘူး…သို့သော် ရေရှည် မှတော့ လေထုညစ်ညမ်းမှုကို အရေးတယူမလုပ်ပဲ မလျှော့ချဘူးဆိုရင် ကိုဗစ်ရောဂါထက်ပိုဆိုးတဲ့ တိတ်တဆိတ် ဇီဝိန်ခြွေသမား ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်…
May Thin Kyu
တဈပွညျလုံး တဈကမ်ဘာလုံး စိုးရိမျတကွီး အာရုံစူးစိုကျနတေဲ့ကိုဗဈသညျ ကာကှယျဆေး တှလေို့ WHO ခနျ့မှနျးခကျြအရဆိုလြှငျ ၂နှဈအတှငျး ကပျရောဂါပွီးသှားမယျလို့ ပွောကွပါတ ယျ… ဒါေ ပမ ယျ့ရ နျကုနျမွို့တှငျ ဆောငျးရာသီနှငျ့ နှဦေးကာ လတိုငျး ဖွဈပျေါ တကျသော အသကျအန်တရာယျ စိုးရိမျအဆငျ့ရောကျတကျသညျ့ လထေုညဈညမျးမှုကွီးကိုရော ဘ ယျတော့မှ ပွီးဆုံးမလဲ? လှ နျ ခဲ့ေ သာ၂ရကျက ကြှနျမအငျးယာကနျနားမှာ ခါတိုငျးလို ပွေးပါတယျ… ကြှနျမသညျ တဈပတျမှာ ၂-၄ရကျ ကို တဈခါပွေးရငျ ၅-၁၀ ကီလိုမီတာ အ မွဲတိုငျး ပွေးဖွ ဈပါသညျ။ သို့သျော နို ဝငျဘာ ၁၈ ရကျ နံနကျ ၇:၃၀ မှာ ပွေးနရေငျ ကြှနျမသညျ အသကျရှူရတာ ခါတိုငျးထကျပိုပွီး ကပျြလာပါတယျ… နှလုံးခုနျနှုနျးကလညျး ပမျြးမြှ အားထကျ ပိုမွငျ့တကျသှားပါတယျ။
အိမျပွနျရောကျတော့ လညျခြောငျးနားလာပွီး glands တှရေောငျလာတဲ့အတှကျ သံသယရှိလို့ AirVisual ဆိုတဲ့ app ကို AQI (အလထေုညဈညမျးမှုအဆငျ့) ကိုဖှကွေ့ ညျ့လို ကျေ သာအခါ 151 AQI (Unhealthy level)! အဲတော့မှ ကြှနျမ သညျ ပွေးနစေဉျ အဆိပျအတော ကျမြားစှာပါဝငျသညျ့ မီးခိုးမြားကိုရှူပွီး မိမိ၏အဆုတျကို ပွငျးထနျစှာ အ လုပျလု ပျစလေိုကျ မိသ ညျဟု သိလိုကျရသညျ။ ပွီတော့ကြှနျမသညျ ဆေးလိပျမသော ကျတဲ့လူပါ သို့သျော ကြှနျမသ ညျဆေးလိပျ ၃-၅ လိပျနဲ့ ညီမြှသညျ့ ပမာဏကို အားက စား လုပျနသေညျ့ တဈနှာ ရီအ တှငျး သ နျ့ရှငျးသညျဟု ထငျသောလမှေ တဆငျ့ရှူမီလိုကျပွီးလား ဆိုပွီး တှေးဖွဈလိုကျသညျ။ အခုရကျပိုငျး လထေု ညဈညမျးမှု သိသိသာသာ မွငျ့ တကျ လာ ပါတယျ… နိုဝငျဘာ၁၈,၁၉,၂၀ သုံး ရကျ ရှိပွီး air pollution level က မနကျ (၅-၈ နာရီ) တိုငျး 150 AQI နဲ့အထ ကျပါ…ထူးဆနျးတာက ကားတှေ လမျး ပျေါ မှာ လုံးဝမရှိတဲ့အခြိနျမှာ လထေုညဈည မျးမှုက အရမျွး မငျ့နတေော့ ကြှနျမ အဖွရှော ရခကျတော့သညျ။ ဒါနဲ့ပဲ မနကျနိုးလာတိုငျး ပွတငျးပေါကျအပွငျသို့ ကွညျ့ဖွဈသျော အ ခါတို ငျး ရနျကုနျမွို့ရဲ့ အခြို့နရောမှာ မီးခိုးတထောငျးထော ငျးထှကျနသေ ညျ ကိုေ တှ့ရသညျ… စကျမှုဇုံလညျးမဟုတျပါ…မွို့လယျခေါငျက ထှကျရှိနတောကိုတှရေ့တာပါ။
ကြှနျမ သတိရမိ တာကအရငျနှဈ ကလညျး AirVisual app နဲ့ကွညျ့တော့ ဆောငျးရာသီအစပိုငျးကနေ နှဦေးအထိ ဒီလိုပဲ လထေုညဈညမျးမှု မွငျ့တကျမှု(130-200 AQI) ရှိ ခဲ့ သညျ…မိုးရာသီရောကျတော့ လထေုညဈည မျးမှုပွနျလြှော့ (20-70 AQI) သှားသညျ။ နောကျထပျ သတိရမိတာက ဆောငျးဦးဆိုရငျ အမှိုကျမီးရှို့ မီးစာလုံကွတဲ့ ဓလေ့… ကြှနျမ မနေ့ ကပဲ စိ တျ ကူးယဉျဖွဈတယျ အမှိုကျမီးရှို့မှုမြားကို အရေးယူနိုငျသညျ့ ဥပဒကေို စညျပငျသာယာကိုအကွံပွုမယျပေါ့… သို့သျော အမှိုကျမီးရှို့မှုမြားကို အရေးယူနိုငျသညျ့ ဉပ ဒေ ရှိပွီးသား ဆိုတာကို ဒီနေ့ po st တဈခုကနေ ဖတျ ဖွဈလို ကျသညျ… အဲ post ကပွောတာက “အမှိုကျမီးရှို့မှုမြားကို အရေးယူနိုငျသညျ့ ဉပဒရှေိသျောလညျး ရပျကှ ကျ တိုငျး တှငျ လူ သနျးပေါ ငျးမြားစှာမှ စှဲစှဲမွဲမွဲ ဆော ငျရှ ကျနသေညျ့ ကိစ်စဖွဈသညျက တဈကွောငျး၊ အမှိုကျမီးရှို့လြှငျ လထေုညဈညမျးစသေညျကို သိရှိနားလညျ မှုမရှိ ကွ ခွငျး…”။
အကဉျြးခြုပျပွောရရငျ အမှိုကျ မီးရှို့တဲ့ မီးခိုးမြားကနေ အသကျရှူလ မျးကွောငျးဆိုငျရာ၊ အဆုတျ၊ နာတာရှညျရောဂါ နှငျ့ ကငျဆာ ဖွဈစသေျောအဆိပျအတောကျ (carcin og en) မြားစှာပါ ဝငျ ပါသညျ။ သဈရှကျသဈခွောကျ မြားဆိုတာ သဘာဝအတိုငျး ဆှေးမွပေ့ကျြစီးနို ငျသညျ့အရာ (biodegradable) ဖွဈပွီ ဓာတျမွသွေဇာ နဲ့ မွဆှေေး (soil comp ost) အနနေွဲ့ ပနျသုံး လို့ရတဲ့ အတှကျမီးရှို့စရာမလိုပါဘူး။ တဈခွားအမှိုကျမြား အထူးသဖွငျ့လပျစတဈဆိုတာက မီးရှို့ရမယျ့အရာမဟုတျပါ…စညျပငျသာယာ နဲ့ recycle comp an ies တှကေနေ တာဝနျ ယူပွီ ထိနျးသိမျးလုပျဆောငျနပေါတယျ။ အခုကာလသညျ ပိုပွီအရေးကွီးသော ကိုဗဈရောဂါကို ကာကှယျဖို့ ဦးစားပေးရမယျ့ အခြိနျဆိုတာမုနျပါတယျ…ဒါပမေယျ့ ရရှေညျအတှကျ ရနျကုနျသူ ရနျ ကုနျသားတှေ ကနျြးမာသော လူနမှေုစနဈတဈခုကို ကိုဗဈအလှနျမှာ ဆကျလကျ နထေိုငျရနျ အလိုရှိသေးတယျဆိုရငျတော့ ရနျကုနျ၏ အသကျ အန်တရာယျစိုးရိမျအ ဆငျ့ရော ကျသ ညျ့လထေု ညဈ ညမျးမှုအား လြှော့ခရြနျ အတူတူ ပူးပေါငျးလုပျဆောငျရမညျ ဖွဈပါသညျ။ လထေုညဈညမျးမှုနဲ့ပတျသကျတဲ့ တဈနေ့ တာအ သကျ ဆုံးရှုံးမှုတှကေို ကိုဗဈလိုတော့ မကွညောပါဘူး…သို့သျော ရရှေညျ မှတော့ လထေုညဈညမျးမှုကို အရေးတယူမလုပျပဲ မလြှော့ခဘြူးဆိုရငျ ကိုဗဈရောဂါထကျပိုဆိုးတဲ့ တိ တ ဆိတျ ဇီဝိနျခွှသေမား ဖွဈလာနိုငျပါတယျ…
Previous post အနံ့ ရ မရ သိရအောင် မောင်လေးပါး ကို နမ်းကြည့်ချင် လိုက် တာ လို့ ပြောလိုက် တဲ့ သဇင်ဦး
Next post မိမိုက်ဂေါ်ထွက်နေတဲ့ ဖက်ရှင်တွေနဲ့ အလန်းစားပို့စ်တွေပေးကာ အထာကျကျလန်းနေတဲ့ ယုသန္တာတင်